नेपाल बन्दमा प्रहरी आतंकित, धानखोलामा ४ राउण्ड गोलि चलायो ! — Sanchar Kendra
१रबिन्द्र मिश्रको राजीनामापछि पाण्डेले दिए यस्तो प्रतिक्रिया, कसलाई के भने ?
२रवीन्द्र मिश्रले दिए विवेकशील साझाको अध्यक्षबाट राजीनामा
३राष्ट्रिय क्रिकेटरको पारिश्रमिक बढ्यो
४जित पक्का भएपछि बालेनले फेसबुकमा लेखे यस्तो स्टाटस, कसलाई के भने ?
५भरतपुरबासीका लागि मेयर रेनुको घोषणा- महिनामा सात हजार लिटर खानेपानी नि:शुल्क
६काठमाडौंमा अब ५ वटा वडाको गणना मात्रै बाँकी, अहिलेसम्म बालेनले कति प्रतिशत मत पाए ?
७बसको ठक्करबाट मोटरसाइकलमा सवार दुई जनाको मृत्यु
८पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिविरुद्ध नेकपा (बहुमत) काे काठमाडौँमा सिठी जुलुस
९राष्ट्रपति भण्डारीले के गरिन घोषणा ? हेर्नुहोस बिस्तृतमा
१०काठमाण्डाैमा ३३ हजार ८७६ मत गन्न बाँकी, बालेन्द्र साह १९ हजार १६६ मतले अघि
११सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग गरेरि २८ लाख ठगेको आरोपमा एक युवक पक्राउ
१२राष्ट्रपतिद्वारा संसद्‌‌मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत Live
नेपाल बन्दमा प्रहरी आतंकित, धानखोलामा ४ राउण्ड गोलि चलायो !
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आवहान गरेको नेपाल बन्दका क्रममा प्रहरी समेत आतंकित बनेको छ । बन्दकर्ताले बन्द अवज्ञा नगर्न सार्वजनिक अपिल गरिरहेका बेला प्रहरीले भने धानखोलामा ४ राउण्ड गोली चलाएको खबर प्राप्त भएको छ ।
आइतबार बिहान करिब ८ बजेतिर धानखोलामा बिना कारण प्रहरीले हवाई फायर गरेपछि स्थानीय त्रसित बनेका छन् । प्रत्यक्षदर्शीले संचारकेन्द्रलाई दिएको जानकारी अनुसार प्रहरीले एकाेहाेराे हवाई फायर गरेपछि स्थानीयहरु घरभित्र लुकेका थिए ।
प्रहरीले यसबारेमा केहि जानकारी दिन चाहेन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आज नेपाल बन्दको आह्वान गरेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मुस्ताङ नेभ्रमण, अरुण तेस्रोको शिलान्यास, भारतीय हतियारधारी कमान्डो नेपाल प्रवेश तथा ओली–मोदी गठबन्धनका विरुद्ध नेकापले नेपाल बन्द आवहान गरेको हो ।
बन्दका कारण देशभरको जनजीवन प्रभावित बनेको छ । लामो तथा छोटो दुरीका यातायात ठप्प छन् भने, स्कुल, बकार, कलकारखानाहरु पनि ठप्प छन् ।
यसैबीच बन्द अबज्ञा गरेको भन्दै बन्दकर्ताहरुले ठाउँ-ठाउँमा सवारीसाधनहरु माथि तोडफोड र आगजनी गरेका छन् । काठमाडौंसहित देशका बिभिन्न ठाउँमा बन्द अवज्ञा गर्दै चलेका सवारीसाधनहरुलाई उनीहरुले निशाना बनाइरहेका छन् ।
भाटभटेनी सुपर मार्केटमा शक्तिशाली बम विष्फोट, जमिनै हल्लिएपछि स्थानीयको भागाभाग
BREAKING: सुदूरपश्चिमका ३ वटा चर्चमा बम बिस्फोट, के छ क्षतिको अवस्था ?
आज नेपाल बन्द, विहानैदेखि आगजनी र तोडफोड, दर्जन ठाउँमा बम विस्फोट
काठमाडौंमा १ लाख ४५ हजार मत गन्दा मेयर पदमा राप्रपा, विवेकशील र सायमीले कति ल्याए मत?
तत्काल ब्युटी पेजेन्ट गर्न नदिन सरकारलाई निर्देशन
हालसम्म नगर प्रमुखमा पाँच र गाउँपालिका अध्यक्षमा ११ महिला निर्वाचित